Zawgyi-One နှင့် Unicode နှစ်မျိုးလုံးသုံးချင်သူများအတွက် ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ » Zawgyi-One နှင့် Unicode နှစ်မျိုးလုံးသုံးချင်သူများအတွက်
By နေမင်းမောင်4:18 PM46 comments
ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ ကွန်ပျူတာကို စတင်အသုံးပြုသူတွေအတွက် Zawgyi-One Install လုပ်နည်းနဲ့ အခု
နောက်ပိုင်းပေါ်လာတဲ့ Unicode နဲ့Zawgyi-One နှစ်မျိုးလုံးကိုမိမိတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့
အသုံးပြုနိုင်စေဖို့အတွက်..ဒီပို့စ်လေးကိုရေးဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်..Zawgyi-One ကို Install လုပ်တဲ့
အခါမှာ 32 Bits အတွက်အခက်အခဲမရှိပေမယ့် 64 Bits အတွက် Install လုပ်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲလေး
တွေရှိတက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်..ဒီပို့စ်လေးက စတင်လေ့လာကာစ နဲ့မသိသေးသူများ အတွက်သာရည်
ရွယ်ရေးသား တာဖြစ်တဲ့အတွက် သိပြီးသားသူများအနေနဲ့ တော့လိုအပ်လိမ့်မယ်လို့ မထင်ပါဘူး..ကျွန်တော်
တို့ Zawgyi-One ကိုအရင်ဆုံး အောက်မှာမိမိတို့အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေဒေါင်းလော့ချလိုက်ပါ..
အရင်ဆုံး Zawgyi-One-20060620 ကို Install လုပ်လိုက်ပါ.. Zawgyi-One-20060620 ကို Install
လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ Keyboard အတွက် 32 Bits ဆိုတဲ့ Folder ထဲမှာရှိတဲ့ zfk-eg-wc2 ကို Install လုပ်
ပေးလိုက်ပါ..ဒါဆိုရင် 32 Bits Users များအတွက် မိမိတို့ရဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ Zawgyi-One ဖောင့်ကို
32 Bits အတွက် Install လုပ်ပြီးသွားပြီ ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ 64 Bits User များအတွက်
Zawgyi-One ဖောင့်ကို အသုံးပြုလို့ရအောင်ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြပေးပါမယ်..တစ်ချို့
က ဒီအဆင့်လေးကိုမသိတဲ့ အတွက် Zawgyi-One ကိုသုံးလို့မရတာတွေဖြစ်တက်ပါတယ်..ဒေါင်းလော့ချ
ထားတဲ့ ဖိုဒါလေးထဲက 32Bits အတွက် Install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ 64 Bits ဆိုတဲ့ Folder လေး
ထဲကိုသွားလိုက်ပါ..ပြီးရင်အဲ့ဒီဖိုဒါလေးထဲက install_me ဆိုတာလေးကို Install လုပ်ပေးလိုက်ပါ..ပြီးရင်
မိမိတို့ ကွန်ပျူတာကို restart ချပေးလိုက်ယုံပါပဲ..ဒါဆိုရင် 64 Bits မှာ Zawgyi-One ကိုအသုံးပြုရတာ
မယ့်နည်းလမ်းလေးပါ..။အပေါ်မှာရှင်းပြခဲ့သလို မိမိတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ Zawgyi-One Font ကို Install လုပ်
ပြီးပြီဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ Unicode ကို မိမိတို့စက်မှာသွင်းဖို့အတွက် Unicode Font တွေကိုဒေါင်းလော့ချ
လိုက်ပါ..Unicode အတွက် ဖောင့်တွေကိုဒေါင်းလော့ချပြီးပြီဆိုရင်တော့ အထဲမှာပါတဲ့ mm3 , winuniiw ,
yunghkio_pop_april_22_ship စတဲ့ ဖောင့်တွေအကုန်လုံးကို Install လုပ်လိုက်ပါ.ဒါဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့စက်မှာ
Zawgyi-One ရော Unicode ရော နှစ်မျိုးလုံးနဲ့ရေးထားတဲ့ စာတွေကိုဖတ်လို့ရသွားပါပြီ.။နောက်ထပ် Unicode
လက်ကွက်ကိုအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် မိမိတို့ရဲ့ ကွန်ပျူတာမှ KeyMagic လေးကို Install လုပ်လိုက်ပါ..ဒါဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့ကZawgyi-One ကိုအသုံးပြုမယ် ဆိုရင် ကီးဘုတ်က Shift နဲ့ Ctrl ကိုနှိပ်ပြီးပြောင်းသုံးနိုင်သလို
Unicode လက်ကွက်ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်လဲ Keyboard မှ Ctrl + Shift + Z ကိုနှိပ်ပြီးပြောင်း သုံးလို့ရသွားပါပြီ..။
ဒါကတော့ လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့ Zawgyi-One နဲ့ Unicode နှစ်မျိုးလုံးကိုမိမိတို့ရဲ့ ကွန်ပျုတာမှာ လွယ်လွယ်
ကူကူနဲ့ အသုံးပြုနိုင် ဖို့အတွက် ကျွန်တော်သိသလောက်ပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးခြင်းသား ဖြစ်ပါတယ်..
popo November 16, 2011 at 9:09 PM
စကားဝါမြေ November 16, 2011 at 11:00 PM
နေမင်းမောင် November 17, 2011 at 2:48 AM
ဟုတ်ကဲ့အကို ... Unicode ဖောင့်တွေကို အင်စတော့ လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ ဖတ်လို့ရမှာပါ .. ပြန်ကြိုးစားကြည့်ပါအုံးခင်ဗျာ ...
chitkhin November 17, 2011 at 11:06 AM
ကိုနေမင်းေ၇ open pffice3မြန်မာလိုက ဖတ်လိုမ၇ဘူးဖြစ်နေတယ် ယူနီကုဒ်လည်၇ှိတယ် ဇော်ဂျီလည်၇ှိတယ်ဘယ်လိုလုပ်၇မလည်ခင်ဗျာ
Konaing November 17, 2011 at 5:21 PM
ဖိုးခွား November 19, 2011 at 9:29 PM
အကို အင်စတောလုပ် ပေမယ့် မပေါ်ဘူး
ဖောင့်တွေလည်းတင်ပီးပီ ယူနီကုတ်မပေါ်လို့ ကူညီပါအုံး
အစ်ကို ခင်ဗျာ အစ်ကို ပြောခဲ့ သလိုပဲ Unicode ကော Zawgyi ရောပါ အစ်ကို side ကဘဲ ဒေါင်းပြီး Install လုပ်ခဲ့ပါတယ် ဒါပေမယ့် အဲဒီ Open Office org3မှာ မြန်မာ လို unicode မပေါ်ပါဘူး အစ်ကို အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ဖြေပေးစေချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ...ကျေးဇူးပါ ခင်ဗျာ
မမေ့တတ်သူ November 21, 2011 at 8:46 PM
ကျွန်တော့်စက်မှာတော့ open office org3 ကိုမြန်မာလိုဖတ်၇ဖို.အတွတ် ဇော်ဂျီ ကိုဖြတ်မှ၇ပါတယ်ခင်ဗျာ....
phone win December 2, 2011 at 10:24 PM
Brother, thanks for your site.
I cannot download vozMe.
နေမင်းမောင် December 8, 2011 at 8:10 PM
ဟုတ်ကဲ့အကို .. ကျွန်တော် ဒီအောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းလော့ချနည်းတွေ ရေးပေးထားပါတယ်..
ငတိုး December 16, 2011 at 9:53 PM
gtalk မှာ လေးထောင့်ကွက်တွေ ဖြစ်နေတာ ဘယ်လိုမှ လုပ်မရဖြစ်နေတယ် အကို...အဲဒါလေး နည်းလမ်းကောင်းလေးရှိရင် ပြောပြပေးပါလား ဗျာ..
yan naing December 25, 2011 at 9:28 PM
tayzar January 23, 2012 at 4:58 PM
Computer မှာ ၏ Virus ၀င်နေလို့ ပါ
Harry January 28, 2012 at 7:36 PM
ကျွန်တော့်ကို ကူညီကြပါဗျာ…။ ကျွန်တော့်ဆီမှာ Gmail ၀င်လို့မရတာတော်တော်ကြာပါပြီ။ ကျန်တာအကုန်ရပါတယ်။ Gtalk လဲတက်တယ်။ Gmail ကို Gmail pgae ကိုမတက်တာပါ..။
Gmail ကို firefox နဲ့ဆို Gmail ကိုသွားလိုက်ရင် Connection ဆိုပြီးအကြာကြီးလုပ်ပြီး Try Again
ပဲကျလာပါတယ် ။ IE နဲ့ဝင်ကြည့်တော့ရပါတယ်။ အဲဒါဘယ်လိုဖြစ်တတ်လဲ….ကူညီပါ..ဗျာာ…
yetun March 19, 2012 at 1:51 PM
i want to use it cos easy to tipe
ကျေးဇူးပဲ.... ခေါင်းစားနေတာ တော်တော်ကြာပြီ... အခုမှပဲ အဆင်ပြေသွားတော့တယ်....
linyone March 29, 2012 at 11:03 AM
ူlinyone March 29, 2012 at 11:07 AM
download လုပ်လုပ်လို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ကူညီပါဦး
can't download , can u active again ? thx !
oonaing April 27, 2012 at 9:15 AM
thank u brother..!
ko nay min... still can't dl that file.... pls check the link again.. thz
ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ တစ်ခုလောက် ကူညီပေးပေးအုံး ကျွန်တော့စက်ထဲမှာ မြန်မာဖောင့်ကို gtalk နဲ့ချက်တဲ အချိန်မှာလဲသုံးလို့ရတယ် ဂျာနယ်တွေလဲ ဖက်လို့ရတယ် ဒါပေမဲ့ ဒက်စတော့ပေါ်မှာတော့မြန်မာလို့ရိုက်လို့မရလို့ ကူညီပေးပါအုံး အတုံးတွေပဲပေါ်နေလို့ မိမိ သိမ်းထားတဲ့ဖိုင်းကိုလဲမြန်မာအမည်ပေးလို့မရပဲအတုံးတွေပဲဖြစ်နေလို့ ကူညီပေးပါအုံး ခင်ဗျာ...............
လင့်တွေ သေနေပီ အစ်ကို ။ ပြန်တင်ပေးပါအုန်း။ အရမ်းလိုအပ်နေလို့ပါ
အစ်ကို နေမြန်မြန်ပြန်ကောင်းပါစေ.. နည်းပညာတွေကို ဒီထက်အများကြီး ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ပါစေ..ကိုသန့်ဇင်ဌေးကိုလဲ ကျေးဇူးပါ.. ဇော်ဂျီလဲ မရ.. ယူနီကုတ်လဲ ..မရ.. လင့်စ်သေနေပါတယ်ဗျ...အားရင်တင်ပေး.. စောင့်မယ်လေ...ဖိုးဖိုးကိုးနတ်ရှင်..ကလည်းအသက်ငင်နေတယ်အစ်ကိုတို့ရေ
aung May 24, 2012 at 9:51 PM
very very Thank brother!
zero world May 25, 2012 at 2:28 AM
zero world May 25, 2012 at 2:29 AM
khine May 25, 2012 at 9:10 AM
ko nay min maung
I can't install zawgyi font for mac os x. Please explain me.
သီဟဦး June 6, 2012 at 3:47 PM
ကိုနေမောင်ရေ Unicode Download Link တွေက အလုပ်မလုပ်တော့ဘူးခင်ဗျ .. ပြင်ပေးပါဦး ..
chitkoko June 8, 2012 at 3:51 PM
ခင်ဗျား အခုလို မျှဝေပေးတဲ့
chitkoko June 8, 2012 at 3:53 PM
ခင်းဗျား နောက်လည်း ပို့စ်အဆန်း
shwelion June 29, 2012 at 2:58 PM
Bro... I can't Download Unicode... Pls... help me.
all link are dead ... can u please renew them ?
linmyint aung July 27, 2012 at 6:31 PM
အကိုရေ လင့်တွေက သေနေပြီဗျ လုပ်ပါဦး
a February 12, 2013 at 10:17 AM
thank you နေမင်း
link တွေဒေါင်းလို့မရဘူး သေနေတာလားမသိဘူး ပြန်စစ်ပေးပါအုန်းနော်
Abdom Rq November 17, 2013 at 8:47 AM
အစ်ကိုရေဗျာ ... ကျွန်တော်နားမလည်တာတစ်ခုမေးချင်လို့ပါဗျာ ZawGyi font ရှိတယ် အင်စတောလဲလုပ်ပြီးပြီ window က update ဖြစ်သွားရင်... ပြသနာစတက်ပြီ gtalk တွေမှာ ဖောင့်မြင်ရပြီးး အတုံးတုံးတွေပေါ်နေလို့... အဲ့ဒါဘယ်လိုများ ဖြေရှင်းရမလဲမသိ
nyi November 25, 2013 at 10:37 PM
link တွေဒေါင်းလို့မရဘူး သေနေတာလားမသိဘူး ပြန်စစ်ပေးပါအုန်းနော်...ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..ကျနော် တကယ်လိုအပ်နေလို့ပါ..